Ziziphi izihlandlo ezicacileyo zokucwangcisa injini ye-intanethi?
I-Intanethi ihlala ikhula kwaye ijikeleza. Nsuku zonke abantu balayisha iitoni zeenkcukacha ezahlukeneyo kwiinjini zokukhangela. Ukuqonda ukuba yintoni umxholo onokuba luncedo kubasebenzisi kwaye uyayahlula kwi-spam, injini ezinkulu zophando ezifana ne-Google kufuneka ziphucule kwaye zihlaziye izilungiso zazo rhoqo. Ngokwenza njalo, banikeza ithuba kubanikazi bewebhusayithi kunye nabasebenzisi abaqhelekileyo ukuba bazuze kwi-data quality - a autohooldus oue. Ngaphezu koko, ukuhlaziywa rhoqo kwe-algorithm kwenza iinjongo zokusesha zihlawulise i-spammers kunye neengqapheli ze-SEO. Ngoko, ukuhlala kwi-TOP ye-SEO game, kufuneka uqaphele zonke izandi ezintsha kwi-intanethi ye-intanethi yokuphucula i-intanethi kwaye wenze ukuphucula okufanelekileyo kwisayithi lakho. Kule nqaku, siza kuxubusha izihlandlo ezintathu ezichazayo ezitshintshile uhlobo lwe-SEO kwaye zenze iingcali ze-SEO zitshintshe iindlela zabo zokusebenzisa i-website.
Utshintsho olunzulu kwi-injini yokukhangela injini yewebhu
Kufanelekile ukuthetha ukuba ngexesha lokugqibela elishumi i-Google izilungiso ze-algorithm ziye zatshintsha kakhulu imigaqo ye-injini yokusesha ukulungiswa. Ngoxa abanye abathengisi be-intanethi behla ukuhla kwezahlulo zabo emva kokuhlaziywa kweGoogle, abanye abanikazi bewebhusayithi bebude bathatha eli thuba ukuphucula izikhundla zabo kwi-SERP. Namhlanje siza kuthetha malunga nezibuyekezo ezintathu ze-algorithm ezinamandla eziguqule i-SEO yanamhlanje.
I-Google Florida Update
Ukuqala kokuhlaziywa kweGoogle kwenzeka ngoNovemba 2003. Yaziwa ngokuba yi-Google Florida update. Olu hlaziyo luyinguqu enkulu kwi-Google rankings kula maxesha. Injongo ephambili yokuhlaziywa kweFlorida yayiyikutshitshisa iingcali ze-SEO ze-black-hat ezazama ukuqhuba izikhundla. Yenzelwe ukukhusela i-SEO yohlobo lwe-black-hat njengegama elingundoqo. Ixesha elithi 'igama eliphambili lokugxotha' liye lavela ukususela kwiintsuku zokuqala zokuphucula ukuphuculwa kwenjini. Yindlela yokwenza umthunzi owenza i-webmasters ukuba isebenzise i-rankings yosesho. Yinkqubo yokufaka amagama athile okhethekileyo okanye isethi yamagama angundoqo kumxholo. Ngolawulo lo mgaqo wokukhangela awuzange uhambelane nomxholo kwaye wenzelwe ngokukhethekileyo ibhobho yokukhangela, kodwa kungabasebenzisi abasebenzisi. Ezi binzana zingaphendulwa ngokubhaliweyo ngokuphindaphindiweyo ukuba kuzwakalisa ukungaqhelekanga. Ngoko, ukuphucula amava omsebenzisi nge-injini yenkqubo yokukhangela, iGoogle inqume ukuba ihlawulwe iiwebhsayithi apho iifayile eziphambili zigcinwa. Emva koku kutsha, iindawo ezininzi ezilahlekileyo zendlela kwaye zihlupheke kakhulu. Kuthatha ixesha elininzi kunye neenzame kubaphathi bewebhusayithi ukubuyisela imithombo yabo yewebhu. Nangona kunjalo, kwakuyisifundo esihle kubo bazama ukuphula izikhokelo ezikhoyo.
Ukuhlaziywa kweGoogle Panda
Okwesibini ngobukhulu bayo kunye nefuthe kwilizwe ledijithali kwakuyi-Google Panda. Kwaqaliswa ngoFebruwari 2011. Injongo ephambili yale fayili yayikukhusela iiwebhusayithi ezinomgangatho omgangatho ophantsi kokusebenza ngendlela yazo kwiziphumo zophando ze-TOP zeGoogle. Ngokwenza njalo, i-Google ingathanda ukubuyela kumasayithi aphezulu kunye neendawo ezifanelekileyo kufuphi ne-TOP ye-SERP kwaye uphucule amava omsebenzisi ngexesha lokukhangela. Olu hlaziyo luqhutywe kwi-12% yeziphumo zophando. Iiplani ezinkulu ze-Intanethi kunye nokuqhutyelwa kweemoto ezilahlekileyo zilahlekelwe ngaphezu kwe-50% yeendwendwe zabo ngenxa yezikhundla zabo ze-SERP. Ukuhlaziywa kweGoogle kubuhlungu kuphela kwezo iwebhusayithi eziphantsi komxholo wekhwalithi. Kweminye imimandla, le meko yayingatshintshi ngokuphawulekayo. I-Google yenza ukuba kucace ukuba umgangatho ophezulu kunye nomxholo ochaphazelekayo uya kuvuzwa ngamanqanaba aphezulu ngaphezulu, ngelixa iikopi ezingabonakaliyo ezincinci ziza kuhlawulwa. I-Panda igxile kakhulu kwiindawo ezinomxholo omncinci. Le fayili yindlela efanelekileyo yeGoogle ekujoliseni iifama eziqulathwe ngokuchanekileyo njengoko yayiba yinto ebalulekileyo kwimiphumo yokukhangela kunye nomxholo wayo ongezantsi ongafaniyo owawunomlinganiselo ngenxa yevolumu. Abaphambili abaphulaphuli imigaqo abayifumananga kuloluhlu lweGoogle kulo mhla. Ngamhla, i-Google iguqulela i-Panda njengenxalenye yengqungquthela yomgangatho wesiseko. Isebenza njengenxalenye yokuhlaziywa okucothayo, inyanga ehleliweyo ngomjikelezo. Ngenxa yoko, kwakunzima ukwazi ukuba isayithi ibuhlungu buyi-Panda okanye ayikho.
I-Google Penguin update
I-Google Penguin algorithm yaqalisa ngo-Apreli 2012. I-algorithm ye-webspam eyenzelwe ukugweba abo abangahambisani nezikhokelo ze-Google. Xa i-algorithm ifakwe ukusebenza, i-Google ikhishiwe le ngxelo:
".le algorithm imelela enye intuthuko kwimigudu yethu yokunciphisa i-webspam kwaye sikhuthaze umxholo ophezulu. Ngelixa singenakukwazi ukuchaza izibonakaliso ezithile ngenxa yokuba asifuni ukunika abantu indlela yokudlala kwimiphumo yethu yokukhangela kunye nokugqithisa amava kubasebenzisi, iingcebiso zethu kubaphathi beWebhsayithi kukugxila ekudaleni amasayithi aphezulu adala amava asebenzisekileyo kwaye usebenzise iindlela ze-SEO ezimhlophe (GOOGLE). "
Kujoliswe kwiwebhsayithi ezisebenzisa amaqhinga okuqhelanisa nobuqhetseba ukubeka phezulu kwiGoogle. Abo babarhwebi be-intanethi kunye ne-webmasters abafumana i juyisi yekhonkco kwiindawo zabo basebenzisa i-black hat ze-SEO zobugcisa ezifana nokuthengwa kwekhonkco okanye ukudibanisa ukulima kwakuvinjelwe. Xa ukukhutshwa kwe-Google Penguin ikhutshwe, iisayithi ezithathe amanyathelo ukususa i-backlinks ezingekho mgangatho zingaphinde zenzeke. Ukususela kwinqanaba layo, iGoogle inikeza ithuba lokususa iinqununu ezimbi ngokukhawuleza kwaye zikhululekile. Yonke into oyifunayo kukusebenzisa i-Google disavow link tool. Abo babebethelwa yi-Google Penguin update bafanele balinde de kube le algorithm igijime kwakhona ukuze ibuyise izikhundla zazo.
Le algorithm isasaza kwii-rankings zewebhusayithi njengemigangatho kunye nezikhonkco ezichaphazelekayo ziyinxalenye ebalulekileyo kwinkqubo yesimo seGoogle. Yingakho kunokuhlawula udumo lwewebhusayithi ukuphumeza isicatshulwa se-SEO okanye uqeshe iqela le-SEO elingenzi nzuzo. Okwangoku, ukuhlaziywa kwe-Penguin kwahamba kakhulu emva kokusetyenziswa kakubi kunye ne-3,1% yemibuzo.